Tag: tirada dadka ku xiran | Martech Zone
Tag: isku xidhka dadka
Demographics-ka Warbaahinta Bulshada
Sabti, Sebtember 26, 2015 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Ma hubo qiimaha dhabta ah ee ku fiirinta tirada dadka ee barta warbaahinta bulshada markii dhexgalka iyo kala duwanaanshaha bogaggaan baraha bulshada ay aad u baahsan yihiin. Xaqiiqdu waxay tahay waxaad ka heli kartaa jeebabka rajooyinka ama khubarada warshadaha dhammaantood. Waxaan u maleynayaa inay xoogaa xiiso leedahay in la arko in ay jiraan waxyaabo kala duwanaan ah oo ku saabsan tirada dadka oo ku saleysan barxadda, in kastoo. Adduun kaamil ah, astaantaadu waxay abuuri laheyd joogitaan
Google wuxuu kugula dhawaaqayaa adiga $ 1B Barnaamijka Wadaagga Dakhliga
Axad, Disembar 30, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Run maahan, kaliya iskuxir sed. Metacafe, oo ah nidaam raadin iyo qiimeyn loogu talagalay fiidiyowyada, ayaa kaliya dhaafey $ 1,000,000 dakhliga la wadaago hal abuurayaasheeda. Mike wuxuu soo wariyay in Revver uu sidoo kale ku dhacay $ 1,000,000 dakhliga la wadaago sanadkan sidoo kale. Waxaan dhaleeceeyay weerarka Google ee ku wajahan bixiyeyaasha wax ka dalbanaya lacag bixinta meelaynta isku xidhka. Michael Graywolf sidoo kale wuxuu leeyahay ... sidoo kale wuxuu qaadanayaa websaydhyo waaweyn oo loogu talo galay inuu ku xidho Google Powers-That-Be. Google ayaa sheeganeysa